Kungani abantu abakholwa kuNkulunkulu kufanele bathandaze, bahlangane, futhi bafunde izwi likaNkulunkulu ukuze bathole ukuphila okusha?
Okwedlule: Abantu abaningi bathi, “Lapho izulu liwa wonke umuntu uzokufa.” Ngakho lapho izinhlekelele zehla, ingabe abakholwa kuNkulunkulu bazosindiswa ngempela ekufeni?
Okulandelayo: Njengoba uNkulunkulu ethanda isintu, kungani ehlisa izinhlekelele ukuze abhubhise bonke abantu ababi abamphikayo nabamelana Naye?
Abantu abaningi bathi, “Lapho izulu liwa wonke umuntu uzokufa.” Ngakho lapho izinhlekelele zehla, ingabe abakholwa kuNkulunkulu bazosindiswa ngempela ekufeni?
INkosi uJesu inguNkulunkulu onomusa nothando. Kuphela nje uma sisekela igama leNkosi uJesu futhi sigcina indlela Yakhe, sikholwa ukuthi lapho ebuya, ngeke asishiye, futhi siyohlwithwa ngokuqondile singene embusweni wezulu.
Kungani umsebenzi kaNkulunkulu usindisa kuphela abantu abalungile futhi hhayi abantu ababi?